दुबईमा सवारी दु’र्घटनामा श्रीमानको नि’धन, श्रीमतीले लेखिन यस्तो मा’र्मिक स्टाट्स « गोर्खाली खबर डटकम
केहि दिन अगी दु’बईमा सवारी दु’र्घटनामा एक नेपाली युवाको नि’धन भएको छ । झापाको अ’र्जुनधारा नगरपालिका-३ खु’ज्ना’बारी घर भएका कैलाश बि’श्वकर्माको गत फेब्रुअरी ४ तारिखमा सवारी दु’र्घटनामा नि’धन भएको हो ।
कम्पनीको कामबाट फर्कैदै गर्दा सवारी दु’र्घटनामा उनको नि’धन भएको थियो । १८ दिन पहिले नि’धन भएका बिश्वकर्माको श’व आज साँझ १० बजे नेपाल आइपुग्ने पारिवारिक श्रोतले बताएको छ । मृ’तक कैलाश बिश्वकर्माको श’व श्रीमती मनु सापकोटाले सँगै लिएर आउदैछन् ।मृ’तकको श’व आजै राती गाउँसम्म पुर्याउने र भोली बिहान दा’हसंस्कार गरिने बताइएको छ ।
बिगत ३ बर्षदेखि दुबईमा कार्यरत कैलाशले आफु परदेशमा एक्लै भएकोले केहि गर्न नसक्ने भन्दै श्रीमतीलाई पनि दुबई बोलाएका थिए । कम्पनीमा कार्यरत श्रीमान र श्रीमतीको बसाई करिब १ घण्टाको दुरीमा रहेको थियो ।
पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनीहरु केहि दिनपछि नेपाल आउने तयारी गरिरहेका थिए ।श्रीमानको नि’धनपछी वि’क्षिप्त ब’नेकी मृ’त’क’ की श्रीमती सापकोटाले फेसबुकमा भा’वुक स्टाटस लेखेकी छन् ।उनले आफ्नो घरको पि’लर ढ’लेको र सबैको बाँ’च्ने स’हारा यति छिटै खो’सेको भन्दै भगवानसँग गु’नासो गरेकी छन् ।
साथै उनले क’लिलो उमेरमै सि’उँदोको सिन्दुर पु’छिएकाले स’माजले बि’धवा, अ’लक्षिनी आ’ईमाई भन्ने होला भन्दै बि’लौना समेत ग’रेकी छन् ।हेर्नुहोस् उनकी श्रीमती मनु सा’पकोटाले फेसबुकमा लेखेको मा’र्मिक स्टाटस-
म एक्लै केहि गर्न न’सक्ने भए मलाई तिम्रो साथ चा’हियो बु’डि भनेर मलाई बि’देश ल्या’उनु भो, तर आज मलाई यहि बिदेशी भु’मिमा ए’क्लै छा’डेर सधैको लागि टा’ढा हुनु भयो मेरो बु’डो ।दुई बु’डाबुडी हा’स्दै रमाउदै घर जाने बेला म बा’कसमा ला’स लिएर कसरी फ’र्किउ । मेरो हजुर हजुरसँग स’म्बन्ध जो’डेको पनि जम्मा ६ ब’र्स त भयो ।
किन यति छोटो समयमा मलाई ए’क्लै बनाएर जानु भयो । मेरो बाबा म’र्नुभन्दा २ दिन पहिले मेरो डि’उटीमै १० मिनेट भे’टेर जानु भयो । त्यो नै अ’न्तिम भेट भयो ।तपाईलाई भे’ट्न आउछु भनेर प’काएको मा’सु भात अ’रुले नै खाए ।
ह’जुरलाई भनेर कि’न्देको र’क्सी अ’झै ते’त्तिकै छ । ७ घन्टा मात्रै केहि न’भैदिए म मेरो बाबालाई भे’ट्थे । किन यति धेरै नि’ष्ठुरी भ’यौ भगवान ।मेरो घरको पि’लर ढा’ल्यौ, हामी सबैको बा’च्ने स’हारा यति छिटै किन खो’स्यौ भ’गवान ? किन यति धेरै नि’स्ठुरी भ’यौ भगवान ? मेरो यो उमेरमा सि’उदोको सि’न्दुर पु’छियो ।